एउटी आमा जसले १४ वर्षदेखि दुई छोरा खोजिरहेकी छन् | Ratopati
एउटी आमा जसले १४ वर्षदेखि दुई छोरा खोजिरहेकी छन्
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २, २०७४ chat_bubble_outline1
‘आमा हामी युद्धका ज्यामी हौं, हामी जानुपर्छ । हामी छिट्टै फर्केर आउछौं चिन्ता नलिनू । यदि कुनै लडाइँमा हामी ढलेको समाचार सुन्नुभो भने दह्रो लौरो टेकेर हिँड्नू । शत्रुको अगाडि नझुक्नुहोला, नरुनुहोला । भित्र जस्तो भए पनि बाहिर हाँसेर हिँड्नु है । आफ्नो ख्याल राख्नू ।’
हिँड्ने बेला छोराहरूले आफूलाई सम्झाएका कुरा, हामीलाई बताउन नपाउँदै झापाकी चन्द्रकुमारी बस्नेतका आँखामा आँसु टिल्पिसकेका थिए । कान्छो छोरा धीरेन्द्र्रले भनेका यी शब्द अहिले पनि आमा चन्द्रकुमारीको दिलदिमागमा गुञ्जिरहेका छन् ।
२०६० साल वैशाख २८ गते काइँलो छोरा वीरेन्द्र्र बस्नेत र कान्छो छोरा धीरेन्द्र्र बस्नेत घरबाट निस्किए । ‘बाबु तिमीहरू आज नजाउ न, भनेकी थिएँ तर मैले भन्दा नभन्दै जानुपर्छ आमा भन्दै घरबाट निस्किए, चन्द्रकुमारीले सम्झिइन् । उनीहरू निस्किएपछि म पनि पछि–पछि लागें । घरबाट अलि पर चोकमा पुग्दा गाडी आयो । मलाई सम्झाए नरुनु आमा, आफ्नो ख्याल गर्नु, भनेको सुन्दा म अचेतजस्तो भएकी थिएँ । छोराहरूले त्यो भन्दा मेरा हात खुट्टा गलिसकेका थिए ।
म तिनिहरूलाई फर्केर हेर्न सकिनँ । बल्लतल्ल आफूलाई सम्हालें र अलि अघि बढें तर मनले मानेन पछि फर्केर हेर्ने हिम्मत गरें । मैले पछि फर्केर हेर्दा मेरा दुवै छोराले गाडीको झ्यालबाट “बाइबाई” आमा भन्दै हात हल्लाउँदै थिए, मलै पनि बाई भनें ।
मलाई बाइबाई भन्दै गएका २ छोरामध्ये मेरो काइँलो छोरा २०६४ मा फर्कियो तर मेरो कान्छो छोरा अmझै फर्केका छैनन् ।
हाम्रो संवाद हँुदै थियो । यी कुरा बताउँदा चन्द्रकुमारी अरू वाक्य निकाल्न सक्ने अवस्थामा भैनन् । एक छिन रोकिएर आँसु पुछ्दै पुनः माइलो छोरासँगको अन्तिम भेटलाई यसरी सम्झिइन् । कान्छो छोरा गएको २÷३ दिनपछि माइलो छोरा पुष्प बस्नेत पनि घरवाट निस्कियो । पुष्पले आमा, आफ्नो ख्याल राख्नु भन्दै बिहान अँध्यारोमै घरबाट निस्कियो । पुष्पलाई उसको बुवाले चोकसम्म छोड्न जानुभयो, मैले घरबाट हेरिरहेकी थिएँ । त्यो दिनदेखि मेरो पुष्प पनि फर्किएको छैन । मेरा दुवै छोराको अवस्था के हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । आफ्ना बेपत्ता २ छोराबीच भएको अन्तिम भेटघाट र बोलचाली चन्द्रकुमारीको मानसपटलमा ताजै छन् ।
मेरा होनाहार २ छोरा बेपत्ता छन्, म तिनको पर्खाइमा छु । मलाई अरू केही चाहिनी थिएन, उनीहरूको कि सास, कि लास जे भए पनि मेरो अघि आइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । मेरा बेपत्ता छोराहरू खोज्न म धेरै भौंतारिएँ लाखौं रकम खर्च गरें । मेरा छोरा खोज्दा तीनपटक पक्राउ परें तर पनि न मेरा छोराहरूलाई खोज्न सके न आफूलाई सम्हाल्न सकेको छु, चन्द्रकुमारी फेरि आँसु झारिन् ।
म धेरैपटक मरेर बाँचेकी छु । मलाईजस्तो अरू कसैलाई नहोस् । आफ्ना होनाहार सन्तान बेपत्ता हुँदा बाबुआमालाई के गुज्रिन्छ, म कुरामा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । यो परेकालाई मात्र थाहा हुन्छ । बरु मृत्यु भएको थियो भने केही वर्षपछि बिर्संदै गैन्थ्यो होला तर बेपत्ता हँुदा कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् ? कतिबेला आमा भन्दै आउँछन् कि भन्ने आसले कुर्दाकुर्दै म जिउँदै मरेकी चन्द्रकुमारीले भनिन् । परिवारका अरूले बिर्सेजस्तो गर्छन्, तर म त आमा हुँ म कसरी बिर्सन सक्छु । कुनामा गएर एक्लै धितमरुन्जेल रुन्छु । सबैले सम्झाउँछन्, अब आउँदैनन् धेरै चिन्ता लिनुहुन्न भनेर तर म कसरी चित्त बुझाऊँ ?
को हुन् चन्द्रकुमारी बस्नेत ?
दमक नगरपालिका–१ झापाकी चन्द्रकुमारी बस्नेतका २ छोरा बेपत्ता छन् । अहिले झन्डै उमेरले ७० पुग्न लागेकी उनका ७ सन्तानमध्ये ५ छोरा र २ छोरी हुन् । १० वर्षे जनयुद्धमा उनको सिंगो परिवार माओवादीमय भयो । २०५७ सालदेखि नै माओवादीमा लागेका चन्द्रकुमारीका २ छोरीको बिहे भैसकेको हुँदा आफूसँगै ५ छोरा र श्रीमान् पूर्ण रूपमा युद्धमा होमिएका थिए । बेपत्ता (पुष्प र धीरेन्द्र्र) बाहेक उनका श्रीमान् भीमबहादुर बस्नेत, अरू ३ छोराहरू (वीरेन्द्र्र बस्नेत र सुरेन्द्र बस्नेत) धेरैपटक मृत्युको मुखबाट जोगिएका प्रसंग सुनाइन् । अहिले पनि उनका श्रीमान् र ३ छोरामध्ये २ छोरा माओवादी राजनीतिमै सक्रिय छन् । चन्द्रकुमारी “बेपत्ता परिवारको” केन्द्रीय सल्लाहाकार छिन् ।
बेपत्ता माइलो छोरा पुष्प बस्नेत
२०३४ साल मंसिर १९ गते जन्मिएका पुष्प वस्नेत निकै मेहनती र इमानदार थिए । “आमा आफ्नो ख्याल राख्नू है भन्दै २०६० साल वैशाखमा घरबाट काठमाडौं हिँडेका थिए । अहिले १४ वर्ष भयो पुष्प अझै घर फर्केका छैनन् । पुष्पले आमालाई निकै माया गर्थे । पढाइमा अब्बल पुष्प राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए । मिलनसार स्वाभावका पुष्प परिवारलाई निकै माया गर्थे । पढाइमा सधैं प्रथम हुने उनले धेरैपटक पुरस्कारसमेत पाएका थिए ।
अध्ययनका लागि सबै भाइ सँगै उनी पनि काठमाडौंमा डेरा लिएर बस्थे । २०६० साल मंसिर १९ गते दिउँसो कालीमाटीबाट नेपाली सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यतिबेला उनी २६ वर्षका थिए । उनलाई पक्राउ गर्ने कारण, माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनलाई सहयोग गरेको भन्ने थियो । जुन दिन उनी प्रक्राउ परे, त्यही दिन उनको जन्मदिन थियो । उनलाई अन्तिम समय भाइ वीरेन्द्र्रले निकै दर्दनाक अवस्थामा भैरवनाथ गणमा देखेका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ । छोराको जन्मदिन आउँदा यी घटना आमाको दिमागमा ताजा भएर आउँछन् ।
बेपत्ता कान्छो छोरा धीरेन्द्र्र बस्नेत
२०४० साल माघ १७ गते जन्मिएका धीरेन्द्र्र बस्नेत कक्षा ८ मा पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लागेका थिए । परिवारको सबैभन्दा कान्छो उनी आमा, बुवा, दिदी र दाजुहरूको निकै प्यारो थिए ।
कहिलेकाहीं स्कुलबाट फर्किंदा १०÷१५ रुपैयाँ जोगाएर मलाई अंगुर, केरा किनेर ल्याइदिन्थ्यो र भन्थ्यो आमा खानूस, स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ, चन्द्रकुमारीले सम्झिइन् ।
२०६० सालको वैशाखमा घरबाट निस्किएका २ छोरामध्ये काइँलो छोरा वीरेन्द्र्र बेपत्ता भएको ३७ महिनापछि फर्किए तर कान्छो छोरा धीरेन्द्र्र अझै फर्किएका छैनन् ।
माइलो दाजुलाई पक्राउ गरेको एक हप्तापछि २०६० साल मंसिर २८ गते बिहान कलंकीमा चिया पिउँदै गरेका धीरेन्द्र्रलाई नेपाली सेनाले पक्राउ ग¥यो । त्यतिबेला उनी १९ वर्षका थिए ।
पढ्नमा निकै चलाख । चन्द्रकुमारी भन्छिन्, ‘उसको दिमाख तेज थियो । आमा तपाईंलाई बूढो हुन दिन्नौं । कपाल फुल्न लागेछ भने पनि नफुल्ने औषधि दिएर तपाईलाई सुन्दर बनाउँछौं भन्दै स्कुलको लुगामा घरवरिपरि हाँस्दै घुमेको दृश्य र बोली ताजै लाग्छ ।’
सेनाको हिरासतम एक छिमेकीले धीरेन्द्र्रलाई दर्दनाक अवस्थामा देखेका थिए । धीरेन्द्र्रले त्यतिबेला सेनाकै हिरासतबाट दाजुलाई लेखेको चिट्ठीले छोरा जिउँदै रै’छ भन्ने थाहा पायौं तर त्यसपछि अहिलेसम्म मेरो कान्छो छोराको अवस्था मलाई थाहा छैन । ऊ पनि घर फर्किएको छैन ।
बेपत्ता तीन छोरा खोज्न हजार रुपैयाँ मागेर काठमाडौं
युद्धले चर्को रूप लिइरहेको थियो । जसकारण चन्द्रकुमारीको परिवार तितरबितर भैसकेको थियो । श्रीमान् र छोराहरू सबै सक्रिय रूपमा माओवादीलाई सघाइरहे । दिनहुँ यति मरे, यति घाइते भन्ने समाचार आउँथे ।
आफ्ना तीन छोरा बेपत्ता भएको खबर पाएकी चन्द्रकुमारीले कतै मेरा छोरा त हैनन् भन्दै टीभीमा देखाउने शवनजिकै गएर हेर्ने गरेको बताइन् । म घरमा एक्लै थिएँ । एकपटक त कस्तोसम्म भयो भने मेरा तीन छोरा बेपत्ता १ छोरा गिरफ्तार । त्यतिबेला मलाई कस्तो भयो होला ? म घरमा टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिनँ । मेरा ४ छोरा पक्राउ परेका छन् । मैले होश गुमाइसकेकी थिएँ । त्यो क्षण सम्झिँदा कहाली लागेर आउँछ ।
मैले निर्णय गरिसकेकी थिएँ– मेरा छोरा खोज्न म जानुपर्छ भनेर । म घरबाट लुक्दैलुक्दै छोरीकहाँ गएँ । छोरीले मलाई १ हजार रुपैयाँ दिइन् । म गाडी चढेर काठमाडौं आएँ । काठमाडौं आएर घट्टेकुलोमा भाडामा एउटा कोठा लिएँ । त्यतिबेला मेराजस्तै आफन्त बेपत्ता भएका अरूले मलाई सहयोग गरे भाडा तिर्नलाई । मैले एक्लै त्यो अँध्यारो कोठामा ५ वर्ष बिताएँ ।
पछि पक्राउ परेको छोरा सुरेन्द्रलाई छुटाइयो भने २०६० सालमा बेपत्ता भएको ३७ महिनापछि काइँलो छोरा वीरेन्द्र्र सार्वजनिक भयए । अनि मलाई थाहा भयो कि मेरा अरू २ छोरालाई सेनाले बेपत्ता पारेको भन्ने । मलाई घरभेटीले माओवादी भन्ने थाहा पाए घरबाट निकाल्दिन्थ्यो, झुट बोलेरै छोराहरू खोज्न धेरै भौंतारिएँ ।
मेरा छोरा सार्वजनिक गर भन्दै धर्ना, आन्दोलन गर्दा झापा र काठमाडौंमै २÷३ पटक पक्राउ परें । धेरै कुटाइ खाएँ । निकै यातना दिन्थ्यो सेनाले । म बोल्न डराउँदिनथें । धर्ना बस्दा अगाडि हुन्थे । मलाई मेरा २ छोराको यादले पिरोलिरहेको थियो । म भोकभोकै छोरा खोज्न निकै संघर्ष गरें तर अहिलेसम्म पत्तँ लाग्न सकेन ।
पार्टीले आँसु पुछ्न सकेन
१० वर्ष लामो जनयुद्धमा धेरै नेपाली सन्तानले ज्यान गुमाए । धेरै बेपत्ता छन् भने, धेरै घाइते पनि । ०५७ देखि माओवादीमा लागेकी चन्द्रकुमारीले पार्टीका लागि ठूलो योगदान दिएकी छन् । अहिले पनि उनी र उनको परिवार माओवादीमै छ । उनी भन्छिन्, ‘मेरा २ छोराको सके सास नत्र लास कसैले ल्याइदिन्छ भने मेरो सारा सम्पत्ति त्याग्न पनि म तयार छु । मैले निकै पीडा भोगेकी छु ।’
जनयुद्धको कालरात्रि सकिएको पनि धेरै वर्ष पुग्यो । मेरा सन्तानजस्तै धेरै आमाहरूले आफ्ना सन्तान गुमाउनुप¥यो । धेरै दिदीहिनीको सिन्दुर पुछियो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो । मेरा २ छोराको सपना राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त्य भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । यो परिवर्तनले मेरो जवनमा केही राहत महसुस त ग¥यो, युद्ध लडेको आफ्नो पार्टी धेरैपटक सरकारमा पनि गयो ।
मेरो सिंगो परिवारले पार्टीलाई गरेको योगदानको पार्टीले सम्मान गर्न सकेन । न त बेपत्ता मेरा २ छोराको अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्यो । म र मेरो परिवार अझै पनि सक्रिय भएर पार्टीमा लागेका छौं । विगतका निर्वाचनमा पनि म सक्रिय भएर पार्टीका उम्मेदवार जिताउन लागिपरें । योपटक राष्ट्रियसभा उम्मेदवार छनोट गर्दा मेरो नाम काटियो ।
त्यो टुंग्याउनु केही दिनपहिले म अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न गएकी थिएँ । अब म बूढी हुन लागें मेरो सांसद हुने इच्छा छ भनेर जानकारी गराएकी थिएँ । तपार्इं चिन्ता नगर्नुस हामी तपाईंको आँसु पुछ्छांै । तपाईं राष्ट्रियसभामा पर्नुहुन्छ, फरक पर्दैन भनेर प्रचण्डले भने । आज मेरा होनहार २ छोरा पनि छैनन् पार्टीले मेरा आँसु पुछ्न सकेन । म झन्डै ७० वर्ष पुग्न लागें । केही आस थियो तर अब सबै हरायो । प्रचण्ड पनि कसैको दबाबमा पर्नुभयो कि । र त, मेरो नाम काटियो होला । तर, कहीं कतै माओवादी क्रान्तिमा योगदान पु¥याउनेको उपेक्षा गरेकोजस्तो मलाई लागेको छ ।
चाडबाड नआइदिए हुन्थ्यो
२०६० सालदेखि चन्द्रकुमारीको परिवारले चाडबाड दसैं–तिहार मनाउँदैन । चाडबाड नजिकिँदा परिवारलाई तनाव हुन्छ । चाडबाड नआइदिए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । त्यतिबेला मेरा छोराहरूको याद झन् तीखो बनेर आउँछ । हामीले दसंैमा जमरा राख्दैनौं, राता अछेता नलगाएको १४ वर्ष भयो । मेरा छोरीहरूले आफ्ना होनाहार भाइहरू बेपत्ता हुँदा तिहारमा माला बुन्दैनन्, टीका लगाउँदैनन् । अब छोराहरूको मृत्यु भैसकेको हो भने पनि काजकिरिया गर्ने आधार छैन । सन्तान बेपत्ता हँुदा साह्रै मानसिक पीडा हुँदोरै’छ ।
हिजो (फागुन १) तत्कालीन नेकपा माओवादीले औपचारिक रूपमा सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । युद्धमा होमिएका नेताहरू अहिले फरक–फरक पार्टीमा छन् । हिजो २३औं जनयुद्ध दिवस मनाइयो । तर, पार्टीले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा चन्द्रकुमारीजस्तै सयौं सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवारको घाउ पुनः बल्झिएको छ । पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन योगदान पु¥याएका योद्धाहरूको भन्दा पहुँच र बलको भरमा छिरेका व्यक्ति पार्टीमा हाबी भएका गुनासा सुनिन्छन् । सबै बेपत्ता तथा सहिद परिवारका व्यथा मिल्दाजुल्दा छन् ।
बेपत्ता हुनेहरूमा युद्घ लड्नेक्रममा हराएका साथै संघर्षका पक्षहरूद्वारा गिरफ्तार गरिएका र त्यस उप्रान्त कहिल्यै नभेटिएका र खबरसमेत सुनिनमा नआएका व्यक्ति पर्ने आईसीआरसीको परिभाषभित्र पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले बेपत्ता पारिएका घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा लिन्छ । नागरिकलाई बेपत्ता बनाउन, अपहरण गर्न मानवअधिकारका मापदण्डविपरीत थुनामा राख्न, मानिसको स्वतन्त्रता हरण गर्न मानवताविरुद्धको अपराध मानिन्छ ।
यातना दिनेलाई यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनका आधारमा कारबाही चलाउने कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता छ । कुनै पनि परिवारको एकजना सदस्य पीडित हुँदा सो परिवारका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि स्वतः असर पर्ने मान्यता स्थापित छ ।
Feb. 14, 2018, 9:40 p.m. Dr. Sugam Jung K.C.
आमा, तपाईको ति दुवै छोराहरुको अवस्था राज्यले सार्वजनिक गर्न नसक्नुका विभीन्न कारणहरु मध्ये अभिलेखीकरण पनि एक हो । नेपालमा अहिले पनि राज्यको कुनै पनि भागमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुलाई बेवारिसे शव भनी अभिलेखीकरण नगरेका कारण दैनिक तिन जनाको परिवारले हजुरको जस्तै अवस्था भोग्न बाध्य छन् । तसर्थ, विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरुले मिति २०७३ श्रावण ०९ को दर्ता नं ६४३ मार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ललितपुरमा बुझाएको प्रतीवेदन अनुसारको लागू गराउन सहयोग गरि थप आमाहरुलाई पिडा हुनबाट जोगाउन विनम्र निवेदन गर्दछु ।